रावणको सुनको लंका विश्वकर्माले बनाएका थिए – Rajdhani Daily
जनकपुरधाम । हरेक चाड–पर्वको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छ । हरेक पर्व मनाउनुको पछाडि त्यसको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारण हुन्छन् । वैज्ञानिक कारण हुन्छन् ।
आज असोज १ गतेका दिन भगवान विश्वकर्माको जन्म दिन हो । त्यसैले आज उनको पूजा गरिन्छ । जनकपुरधाम क्षेत्रमा विहानैदेखि पानी परिरहेको छ तर भक्तजनहरुलाई त्यसको परवाह छैन सबै पूजामा लागेका छन । ‘अराध्यदेवको पूजा छ पानीले हामीलाई रोक्न सक्दैन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका प्रदेश २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह हिराले वताए । कुनै पसल छैन जहाँ माटोको मूर्ति राखेर पूजा नभएको होस् ।
हिन्दु संस्कृतिमा उनलाई यन्त्रको देवता मानिन्छ । उनले यन्त्रको प्रयोग गरी मानव समाजलाई भौतिक सुखमा पु-याउनका लागि विभिन्न कार्य गरेका थिए । प्राचीन समयमा स्वर्ग लोक, लंका, द्वारिका, हस्तिनापुर जस्ता स्थानका रचयिता भगवान विश्वकर्मा नै भएको बताइन्छ ।
यस दिन सबै कार्यस्थल, कारखाना, कम्पनी आदिमा सबै मेसिन र औजारहरुको पूजा गरिन्छ । भगवान विश्वकर्मा एक देवता थिए, जसले ब्रम्हान्डको निर्माण गरेका थिए भनिन्छ । उनी भगवान ब्रम्हाका पुत्र थिए र ईश्वर रहने सबै स्थानको निर्माण उनै विश्वकर्माले गरेको मानिन्छ । ईश्वरको उड्ने खालका विमान र सबै प्रकारका शस्त्र पनि विश्वकर्माले बनाएका थिए ।
रावणको सुनको लंका विश्वकर्माले नै बनाएका थिए । भगवान शिवले पार्वतीसँग विवाह गरेपछि विश्वकर्माबाट सुनको लंका निर्माण गर्न लगाए ।
विश्वकर्मालाई देव शिल्पी विश्वकर्मा पनि भनिन्छ । उनको जन्म दिनलाई नेपाल मात्र नभएर भारत र अन्य हिन्दु धर्म मान्ने देशहरुमा विश्वकर्मा जयन्ती अथवा विश्वकर्मा पूजाको नामले पनि चिनिन्छ । देव शिल्पी विश्वकर्माले नै देवताहरुका लागि महल, अस्त्रशस्त्र, आभूषण आदि बनाउने काम गर्थे, त्यसैले उनी देवताका पनि आदरणीय थिए मैथिलीका साहित्यकार एवं सांस्कृतिविद् डा. राजेन्द्र विमल वताउनुहुन्छ ।
सृष्टिको रचनाको प्रारम्भमा भगवान विष्णु क्षीर सागरमा प्रकट भएका थिए । विष्णुजीकोे नाभि–कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न भएका थिए । ब्रह्माजीको पुत्र को नाउँ धर्म थियो, जसको विहे वस्तु नाउँका महिलासंग भएको थियो । धर्म र वस्तु को संसर्गबाट सात पुत्रको जन्म भएको थियो । सातो पुत्रको नाउँ वास्तु राखियो जो शिल्पशास्त्रको कलामा पारागंत थिए । वास्तुको एउटा छोरा भयो, जसको नाउँ यसैकारणले भगवान विश्वकर्मा राखियो ।
जसलाई प्रथम इन्जिनियर र मेसिनका देवता भनिन्छ । भगवान विश्वकर्माको अनेक रूप रहेको वताइन्छ । दूई बाहु भएका, चार बाहु एवं दस बाहु भएका तथा एक मुख, चार मुख एवं पंचमुख भएका । उनकोे मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञ नाउँका पांच पुत्र थिए । यस्तो पनि मान्यता रहेको छ । पाँचै छोरा वास्तु शिल्पको छुटटा छुटटै विधामा पारगंत थिए र उहाँहरुले धेरै कुराको आविष्कार गरेका थिए । यस प्रसंगमा मनुलाई फलाम, मयलाई काठ, त्वष्टालाई ताम्बा, शिल्पी ईंट र दैवज्ञलाई सुन–चांदीले जोडिन्छ ।
विश्वकर्माको कृति ?
इन्द्रको सर्बाधिक शक्तिशाली अस्त्र बज्रको निर्माण विश्वकर्माले नै गरेका थिए । शास्त्रका अनुसार भगवान विश्वकर्माले सृष्टिको रचना गर्न ब्रह्मालाई सहयोग गरे र संसारको रुपरेखाको नक्सा तयार गरेका थिए ।
उनले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी तीनै लोकको निर्माण गरे । इन्द्रप्रस्थ जुन महाभारतका पाण्डवको भव्य महल थियो, द्वारका जुन भगवान श्री कृष्णाको नगरी थियो उनले नै निर्माण गरेका थिए । पुष्पक विमानको निर्माणपनि भगवान विश्वकर्माले नै गरेको विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ । यसका अतिरिक्त देवताहरुको दैनिक उपयोगमा आउने समानहरुपनि उनले नै वनाएका थिए । कर्णको कुण्डल, विष्णु भगवानको सुदर्शन चक्र, शंकर भगवानको त्रिशूल र यमराजको कालदण्ड आदि ।
विश्वकर्माको महत्व ?
पूजा गर्दै स्थानिय
देव शिल्पी भएकाले भगवान विश्वकर्मा मेसिनरी तथा शिल्प उद्योगसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका लागि प्रमुख देवता मानिन्छन् । वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि ब्यक्तिले विहानदेखि साँझसम्म कम्प्युटर, मोटरसाइकल, कार, मोबाइल, पानी तान्ने मोटर, मिल, टिभि अन्य बिजुलीका उपकरण आदि मेसिनरी उपकरणको प्रयोग गर्छन् । भगवान विश्वकर्मा यी सबै ब्यक्तिहरुका लागि देवता हुन् ।
यसै कारण वर्तमान युगमा विश्वकर्माको महत्व पनि दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । पहिले शिल्पकारहरुले मात्र उनको पूजा गर्ने गरेकोमा हाल घर घरमा उनको पूजा हुन थालेको छ सांस्कृतिविद चन्द्रमोहन झा पड़वाले वताए ।
विश्वकर्माको पूजा गर्ने हो भने मेसिनरी सामानले लामो समयसम्म आफूलाई साथ दिन्छ र आफूलाई धोका दिदैन भन्ने मान्यता छ । आफूले प्रयोग गर्ने कुनै पनि मेसिनरी सामग्रीलाई राम्रोसँग सफाई गरेमा नै विश्वकर्मालाई खुसी तुल्याएको ठहर्छ । विश्वकर्माको तस्बिरमा फूल र माला लगाइदिएर मात्र विश्वकर्मालाई खुसी तुल्याउन सकिदैन ।
भगवान विश्वकर्माको जयन्ती वर्षाको अन्त्य र शरद ऋतु प्रारम्भ हुने बेलामा मनाउने गरिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यो दिन सूर्य कन्या राशीमा प्रवेश गर्छन् । सूर्यको गति अंग्रेजी तारिखसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले कन्या संक्रान्ति पनि प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर १७ मा पर्छ । प्रायः यही दिन पर्ने भएकाले विश्वकर्मा जयन्ती पनि सेप्टेम्बर १७ मा मनाइन्छ । हाम्रो नेपालमा असोज १ गते मनाउने परम्परा रहेको छ ।
नेपालमा पनि विश्वकर्मा पूजा गर्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको छ । कुनै पनि मेसिनरी कार्य गर्नेहरुले उनको पूजा गर्छन् । कुन्े कार्यको शुभारम्भ गरेको बेला विश्वकर्माको पूजाअनिवार्य भएकोजनकपुरधामका औषधी व्यवसायी प्रमोद अग्रवालले वताए ।
भगवान महादेवले ब्रहृमा र विष्णुलाई सृष्टिको सृजना र पालनको भिन्न भिन्नै जिम्मेवारी दिएका थिए । सृष्टिको सृजना गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन ब्रह्माले आफ्नो वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई आदेश दिए ।
सवारी साधन पूजा गर्दै स्थानीय
उनीहरु सबैको मुल विश्वकर्मा हो । त्यसैले उनको पूजनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक उर्जा दिन्छ र काममा आउने सबै बाधा अड्चनहरुलाई तोडिदिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ सांस्कृतिवद् डा. भोगेन्द्र झाले वताए । द्वापर युगमा भगवान् कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा ‘भेद द्वारका’ बनाइ लुकाएको धार्मिक विश्वास छ । एकै रातमा समुद्रको बीचमा ‘भेद द्वारका’ को निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविद्का रुपमा मानी त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको छ ।
विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उनको विद्वताको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वासका साथ पूजा गर्दछन् । आजको दिनलाई वास्तुविद्ले वास्तु दिवसका रुपमा समेत मनाउने गर्छन् । हिन्दुहरुले औद्योगिक क्षेत्र,कलकारखाना,उद्योगहरु तथा विभिन्न फलामे औजारमा विश्वकर्मा पूजा गरिरहेका छन् । कलकारखाना,उद्योगधन्दा,मर्मतकेन्द्र,ग्यारेज,सवारीसाधन र यन्त्रसँग सम्बद्ध स्थलमा बिहानै सरसफाइ गरी ध्वजापताका, रंगीचंगी माला रिवनको प्रयोग गरि विश्वकर्माको फोटो राखी बिशेष पूजा पनि गरिन्छ ।
विश्वकर्माको सम्बन्धमा एउटा कथापनि लोकप्रिय रहेको छ । प्रचलित कथा भगवान विश्वकर्माको महत्वलाई स्थापित गरिएको जानकारहरु वताउँछन ।
कथा अनुसार वाराणसीमा धार्मिक व्यवहारवाट चल्नेवला एउटा रथकार आफनो पत्नीको साथ रहदै आएका थिए । आफनो कार्यमा निपुण थिए, तर विभिन्न स्थानमा घुम्दा अत्यधिक मेहनत पछि पनि भोजन वाहेक कुनै धन प्राप्त भइरहेको थिएन ।
पति जस्तै पत्नीपनि पुत्र नभएका कारण चिन्तित रहदै आएकी थिइन । पुत्र प्राप्तिका लागि विभिन्न साधु–संताहरु कहाँ पनि जान्थे, तापनि उनको यो इच्छा पूरा भइरहेको थिएन । त्यसैवेला उनको एक छिमेकी ब्राह्मणले रथकारको पत्नीलाई सल्लाह दिए तिमी भगवान विश्वकर्माको शरणमा जाओ, तिम्रो ईच्छा पूरा हुन्छ । अमावस्या तिथिमा व्रत गरेर भगवान विश्वकर्माको महात्म्य सुन्न उनले सल्लाह दिएका थिए ।
यसपछि रथकार एवं उनकी पत्नीले अमावस्या तिथिमा भगवान विश्वकर्माको पूजा गरे, जसबाट उनीहरुलाई धन–धान्य र पुत्र रत्नको प्राप्ति भयो र उनीहरु सुखी जीवन व्यतीत गर्न लागे सो कथामा उल्लेख रहेको छ ।